गाइड तुलना परीक्षामा ग्रिल क्लीनर। तपाईंको उपयोगी समीक्षा।
सुरु बगैचा बगैचा आराम ग्रिल क्लीनर
जुन 21, 2017
1 खरानी, ​​चिसो र अन्न अवशेषको विरूद्ध ग्रिल क्लीनरको साथ
2 सफा गर्न ग्रिल - एक विशेष कुरा
3 कोमल बारबेक्यू क्लीनरले वातावरण र स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्छ
4 जोखिम र आवश्यक सामानहरूको अवधि
5 ग्रिल ब्रशको प्रयोग
6 यी सबै भन्दा राम्रो ग्रिल क्लीनर हुन्
7 प्रोविन ओवन क्लीनर
9 ब्रुन हाइटमान शुद्ध सोडा सोडा
10 डा बेकर ब्रैट क्रस्ट हटाउने
11 K2r ओवन क्लीनर
12 वेबर क्लीनर
13 पुरानो गृह उपचारले बारबेक्यू सफाई संग मद्दत गर्न सक्छ
खरानी, ​​चिसो र अन्न अवशेषको विरूद्ध ग्रिल क्लीनरको साथ
मरिडिड्स, सब्जी र मासु अवशेषहरु, पनीर निशानहरू, जडीबुटी र बोसो बोसो को अवशिष्ट - त्यो प्रायः ग्रिलमा छोडिन्छ, जब सबै अतिथिहरू पहिले नै सफा गरिन्छन् र विशेष गरी सफा गर्ने। ग्रिल को धातु मा तेल, ग्रीस र प्रोटीन घनत्व र परतहरु लाई बनाइन्छ जुन ठूलो प्रयास संग एक लामो समय पछि हटाउन सकिन्छ। प्रभाव प्राप्त गर्न, प्रायः केवल गहन scrubbing र आक्रामक सफाई एजेन्टको प्रयोगमा मद्दत गर्दछ। तथापि, अहिले पनि अधिक पर्यावरण अनुकूल छ र बरु धेरै प्रभावकारी हुन्छ ग्रिल क्लीनर, यो सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छ किनकि ग्रिली पौधाहरु को सफाई मा विशेष मांग राख्छ। सबैभन्दा पहिला, यो हो, निस्सन्देह, खाना खाने ठाउँहरू, जुन स्वच्छतामा विशेष माग राख्छ। यसको अतिरिक्त, यन्त्रहरूले केवल आवश्यक प्रदर्शन प्रदान गर्न सक्दछ भने व्यक्तिगत घटक - र विशेष गरी गेट ग्रेट - सफा र अवशिष्ट हुन सकिन्छ। खाना, तेल र बोसोको पुरानो भागहरू मात्र ब्याक्टेरियाको जोखिम समावेश गर्दैनन्, तर न्यानो र अप्रिय आलोचनाले नराम्रा नयाँ व्यंजनहरूको खतरा पनि समावेश गर्दछ।
सफा गर्न ग्रिल - एक विशेष कुरा
ग्रिल क्लीनरहरू एल्युमीनियम, प्लास्टिक वा भाँडामा लागू हुँदैन। सफाईको केन्द्रमा, तथापि, ग्रिल गेट हो, जसले सफाईको बेलामा विशेष समस्याहरू प्रकट गर्दछ। खराब मात्रामा घुलनशील पदार्थहरू जस्तै मोटो, तेल र प्रोटीन जस्ता गहन प्रदूषण समस्याग्रस्त र असामान्य सतहहरु र ग्रिल ग्रेट को झलक संरचना हुन्। यसैले पदार्थहरू लामो समयसम्म पालन गर्नैपर्छ, त्यसैले उनीहरूको चिसो-भंगको प्रभाव विकास गर्न पनि तरल हुँदैन। प्रायः मोटो घर्षण र जलाउने तह तहहरूको स्थितिमा, यो अवशिष्ट हटाउनुमा सादगीको परिणाम हो। यो ध्यान दिइन्छ कि ग्रिल ग्रिलहरूको भिसा, तिनीहरूको साइजको कारण, प्रायः धेरै जटिल वा असम्भव छ। यसैले, सबैभन्दा राम्रो डिटर्जेंट फोम र स्प्रे फारममा छन् वा ब्रशसँग प्रयोग गरिन्छ। यसैले, ग्रिल क्लीनर अनुकूल छ र सबै सतहहरु लाई पूर्णतया पालन गर्दछ जुन पनि पुग्न गाह्रो छ।
कोमल बारबेक्यू क्लीनरले वातावरण र स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्छ
ग्रिल प्रणाली सफा गर्दा, धेरै आक्रामक रसायनहरू प्राय: प्रयोग गरिन्छ। यसमा केहि खतरनाक हुन्छन् र मानिस वा प्रकृतिको लागि विशेष गरी स्वस्थ छैनन्। यी पारंपरिक बारबेक्यू क्लीनरहरुमा सोडियम लाइहरु, तथाकथित कास्टिक क्षार (पोटेशियम क्लोराइड) वा अन्य रासायनिक खतरनाक पदार्थहरु प्रयोग गरिन्छ। यी रकमहरू प्रभावकारी छन् तर विशेष सावधानीहरूको आवश्यकता पर्दछ। छाला सम्पर्कबाट बचाउन वा धूमको साँसिसबाट बच्नको लागि, हामी यी खतराहरू प्रयोग गर्दा सुरक्षात्मक कपडाहरू र चश्मेहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छौं। प्रयोग पनि खुल्ला हावामा राख्नु पर्छ। सबै मा, यो भन्न सकिन्छ कि वातावरण र स्वास्थ्य अधिक भारको विषय हो, खासकर जब सफाई नियमित रूपमा गरिन्छ र यी पारंपरिक ग्रिल क्लीनरहरूको प्रयोग।
तथापि, गत केहि वर्षहरुमा वैकल्पिक र अधिक सज्जन बारबेक्यू क्लीनरको उत्पादनमा ठूलो प्रगति गरिएको छ। व्यापारले ग्रिल क्लीनरहरूको सम्पूर्ण दायरा प्रदान गर्दछ, जुन बिना कास्टिक एल्किस र कास्टिक एल्किसहरू छन्। यी पदार्थहरू नत्र धेरै ज्वलनशील हुन्छन् र नत्र र श्वसन अवस्थाका लागि विषाक्त फोमहरू विकसित हुन्छन्। तिनीहरूसँग सुरक्षात्मक कपडा र यहाँको खाली ठाउँहरूमा पनि काम गर्न सकिन्छ। ग्रिल क्लीनर दुवै बगैचा ग्रिलमा, साथै भान्सामा कुकर र हुडहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कुल मिलाएर यो भन्न सकिन्छ कि सफाई सतहहरू सामान्यतया मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ जब ग्रिल सतहहरु ठुलो हुन्छ, किनकि अन्यथा विषाक्त धुलोहरू विकास गर्न सक्दछन्। संवेदना पतला हुनुपर्छ र कस्टो सोडा र पोटेशियम पछाडि राख्नु पर्दछ।
जोखिम र आवश्यक सामानहरूको अवधि
यदि पर्यावरण-अनुकूल ग्रिल क्लीनर प्रयोग गरिन्छ भने, केहि अतिरिक्त सामानहरू आवश्यक छन्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि ग्रिलको प्रयोग पछि, सफाई सुरु गर्नु अघि धेरै समय भरी लाग्दैन। यदि सम्भव भएमा, ग्रिल ग्रेट ठूलो ठूला कन्टेनरमा भिजेको हुनुपर्छ। यद्यपि, स्प्रे, फोम र ब्रशसँग प्रयोग गरिएका पदार्थहरू सजिलैसँग पालन गरिन्छ, त्यसैले यो प्रक्रियासँग फैलिएको हुन सक्छ। जोखिम को अवधि मुख्य रूप देखि प्रदूषण को डिग्री द्वारा मापा जान्छ। यदि यो धेरै तीव्र छैन भने, यसले ग्याँस र गहिरोको प्रभाव प्रयोग गर्न केही मिनेट लाग्न सक्छ। यस पछि, ग्रिल क्लीनर र गीला क्वाटर लाई हल्का र नरम कपडा या कपडा संग पकाइयो। माइक्रोफिब्रे कपडा प्रयोग गर्न यो सिफारिस गरिन्छ। यदि बोसो, तेल र प्रोटीन अवशिष्टहरू धेरै ठूलो हुन्छन् भने लुघन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सबै मा, सबै भन्दा राम्रो कुरा गर्न को लागी ग्रिल क्लीनर रातभर छोड्ने छ, तर कुनै पनि मामलामा कम्तिमा दुई घण्टा। त्यसपछि पकाउनको लागि न्यानो र सफा पानी प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रायजसो अवस्थामा, तल्लो तह सजिलै हटाइनु पर्छ। यो सबैभन्दा अधिक सामग्री-अनुकूल संस्करण हो। यदि मृग उपचार गर्न सकिँदैन भने, तार ब्रश र स्क्रैपर्सको प्रयोग आवश्यक छ।
ग्रिल ब्रशको प्रयोग
यदि ग्रिल ग्रिल तीव्र रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने राम्रो सफाई एजेन्ट प्रयोग गर्दा ग्रिल ब्रश पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि, गेटको सामाग्री कडा कडा बलियो हुन्छ, त्यसैले यो प्रकृया मात्र प्रयोग मात्र गर्नु पर्छ। ग्रिल ब्रश (वा स्क्रैर) कठिन क्षेत्रहरूमा पुग्न उचित आकारको हुनुपर्छ। व्यापारमा, त्यहाँ समान बर्तनहरू छन् जुन प्रयोगको लागि ठीकसँग स्टेनलेस स्टीलबाट विकसित गरिएको छ र यसैले प्रभावकारी र असुविधाजनक सफाई सक्षम पार्दछ। ग्रिल ब्रशको अवस्थामा, ख्याल राख्नु पर्दछ कि पीतल ब्रिस्टल प्रयोग गरिन्छ। यसले ग्राउण्ड गेटको धातुबाट आत्म-पकाएको अवशिष्टलाई हटाउन अनुमति दिन्छ। इस्पात ऊन व्यक्तिगत मामलाहरुमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यी सबै भन्दा राम्रो ग्रिल क्लीनर हुन्
Ecolab Acti ग्रिल क्लीनर
निर्माताको यो सफाई उत्पादन Ecolab बजारमा उपलब्ध सबैभन्दा स्वास्थ्य र पर्यावरण अनुकूल बार्बेक्यू क्लीनर मध्ये एक हो। यसले तीव्र र मेहनतबाट हटाउन पनि contaminants र जलाएको माथि वोसो जमावटलाई पनि हटाउँछ। मोटो तरल क्रीमले पनि राम्रो पालन गर्दछ, जस्तै ऊर्ध्वाधर सतहहरु मा तरल पदार्थ या फोम को रूप मा, जो यस प्रकार को साफ गर्न को लागि आसान हो। यद्यपि यो अन्य क्लीनरहरू मात्र 30 यूरो प्रति लीटरको मूल्यमा एक लीटर भन्दा अधिक महँगा हो, यो यसको कडा स्थिरताको कारण पनि धेरै किफायती छ र अन्य बारबेक्यू क्लीनरहरूको साथ भन्दा कम कम खरिद गरिन्छ।
प्रोविन ओवन क्लीनर
यो सफाई एजेन्टमा असाधारण सफाई शक्ति छ र विशेष गरी ग्रिलमा प्रयोगको लागि सिफारिश गरिन्छ। तरललाई पनि लागू ब्रश को माध्यम ले पुग्न गाह्रो छ जुन भागहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। यहाँ एक ब्रश वा स्क्रैपर्स को उपयोग संग सुरक्षित रूप देखि फैल सकते हो। पदार्थ लागू हुन्छ, सोच्न अनुमति दिईन्छ, र बस तेल र तेल अवशेषहरू मेटाउँदछ। तथापि, 30 एमएल को लागि 500 यूरो संग यो ग्रिल क्लीनर बिल्कुल सस्तो छैन। सम्भावित स्वास्थ्य क्षतिलाई ध्यान दिनुहोस्। छाला, अनुहार र श्वसन अवस्था संग सम्पर्कमा यो क्लीनरले जलाउन सक्छ। जब तीव्र रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जंगले क्षति पनि धातुद्वारा हुन सक्छ। उत्कृष्ट सफाई शक्तिको कारण, यो ग्रिल क्लीनर अत्यधिक बलियो ग्रिल गेट को लागि इष्टतम सफाई पदार्थ हो।
यो वास्तवमा एक क्लीनर हो, जुन पान्सेली उपकरणहरू सफा गर्नका लागि बनाइएको छ जस्तै प्यान र बर्तन। यहाँ फाइदा छ कि कम्मोई, धेरै अन्य बार्बेक्यु क्लीनरका विपरीत न केवल इस्पातको लागि प्रयोग गरिन्छ, तर एल्युमिनियमको सफाईको लागि पनि। Kamofix एक सफाई फोम हो जो कठोर पालन गर्दछ, पनि कठिन भागहरु मा, जहां वसा, गलती र पनि सजिलै जलाइएको छ, सतहहरु बाट पुरा तरिकाले छुट्याउनुहोस्। पेंट को सफाई मात्र देखि बचें।
ब्रुन हाइटमान शुद्ध सोडा सोडा
यो Sodareiniger यसको कम मूल्य, खासकर 10 यूरो पनि प्रभावित छैन। र यो खरीद गर्न मात्र सम्भव छ, तर आवश्यक भएमा यो पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। सोडा पाउडर पानी र एक छिड़काउने एजेन्टसँग मिल्दछ, तर अन्य बारबेक्यू क्लीनर भन्दा धेरै लामो काम गर्दछ। अर्को क्षण अत्यधिक क्षर्किक प्रभाव हो जुन एल्युमिनियमको सफाईको लागि प्रयोग असंभव हुन्छ। स्टेनलेस स्टीलको सफाईको लागि, तथापि, यो सोडा खैरो राम्रो हुन सक्छ र, माथिको, लागत-बचत विकल्प।
डा बेकर ब्रैट क्रस्ट हटाउने
साथै यस अर्थको साथ 23 यूरो को 1 लीटर को लागी एक अधिक लागत-गहन संस्करण को मूल्य हो। तथापि, दोस्रो उपचारको बेलामा सफा पावरमा निर्भर रहन्छ। यस क्लीनरलाई विशेष गरी व्यावसायिक प्रयोगको लागि सिफारिश गरिएको छ। सामान्य घरको उपयोगको लागि, रसायनहरू मात्र सजिलै समस्याग्रस्त छन् किनकी तिनीहरू अत्यधिक संक्षारक हुन्छन्। यदि तपाइँ यो ग्रिल क्लीनर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंले चश्मे, मुख सुरक्षा र सुरक्षात्मक दस्तानेलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्छ। डाक्केकर क्रस्ट क्रक एक्सप्लोररको फायदा भनेको हो कि सबैभन्दा जरुरी ग्याँस पनि कुनै मौका छैन र बिलिंग उपकरण कुनै पनि अवस्थामा सफा गर्न सकिन्छ।
K2r ओवन क्लीनर
यो ग्रिल क्लीनरको प्रयोगको लागि मुख्य तर्क मूल्य हो। प्रति लीटर, यो सफाकले5यूरो भन्दा बढी खर्च गर्दैन। तथापि, सफा पावरमा कटौती गर्नु आवश्यक छ। ग्रिल ब्रश वा स्क्रैपरको प्रयोग अझै पनि लामो जोखिम समयमा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि तपाईं पैसा बचत गर्न चाहानुहुन्छ र scrubbing बाट टाढा पनि शङ्का गर्दैन, यो सफा पनि छ।
यदि तपाईं ग्रिलको द्रुत र सतर्क सफाई सफा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ वेबरको क्लीनर पनि पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। यदि ग्रिलको बाहिर सतहहरू फेरि चमक गर्दै छन् भने, यो क्लीनर पर्याप्त छ। जलाशयमा वोसो अवशेषहरू र अण्डा को सफेद र मरिनाडेडले जलाएको एक टुक्रा विरुद्ध, यो ग्रिल क्लीनर छोटो हुन सक्छ।
पुरानो गृह उपचारले बारबेक्यू सफाई संग मद्दत गर्न सक्छ
यदि तपाईं बारबेक्यू ग्रिल सफाई गर्दा पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ र अझै पनि वातावरणको सुरक्षा छ भने, पुरानो घरको उपकरणको प्रयोग सिफारिस गरिन्छ। विशेष गरी प्रभावकारी छ, उदाहरणका लागि, ग्रिल गेट बाहिर जलाइएको छ। जब पछिल्लो सॉसेज र स्टेक ग्रिलबाट गायब भएको छ, तपाईं ग्रिल फेरि सेतो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र क्यान्सरहरू हल गर्न सक्नुहुनेछ जबसम्म लामो वोसो अवशिष्ट जलाइन्छ। परिणामस्वरूप कार्बन कालो लगभग अवकाश र एक ग्रिल ब्रश संग अवशेषहरु बाट मुक्त हुन सक्छ।
ठुलो कफी वा कफी मैदानको प्रयोग पनि उपयोगी छ। कपडाबाट ग्रिल गेटमा तरल वा पदार्थ लागू गर्नुहोस् र यसले रातभरै काम गरौं। र अर्को बिहान तपाईं ग्रिल आफ्नो सबैभन्दा ठूलो गंदगीबाट मुक्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि प्रभावकारी कोश को स्नेहिंग प्रभाव हो। पहिले, साबुन तेलको आशसँग मिश्रण गरेर तयार गरिएको थियो। यो प्रभाव पनि ग्रिल सफाई संग प्रयोग गर्न सकिन्छ, यदि तपाइँ प्रयोग गरिएको ग्रिल ग्रेट को एस्चेलाज लागू गर्नुहुन्छ भने। उत्सुकतापूर्वक, अर्कोतर्फ, टिप ग्रिल गेट ठाँउ देखिन्छ भने, यदि एक चींटी ह्याँस नजिकको छ भने। क्र्राफिश, यसैले कसम खाएर विशेषज्ञहरूले भित्ताको टुक्रालाई राम्ररी प्रभावकारी रूपमा खानेकुराबाट मुक्त गर्नेछन्।
ग्रिल पार्टी राम्रो रमाइलो हुन सक्छ, पछि ग्रिल को सफाई यो अक्सर छैन। तथापि गिलिंग र स्टिक्स र स्टसहरू अघि छ भने सफा ग्रिलमा पकाइएको बेलामा मात्र साँच्चै स्वादिष्ट हुन्छ। ग्रिल ग्रेट सफाईको अवस्थामा, कसैले पनि एक ह्यान्डल र यूरोलाई निकै सानो भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ। यदि तपाईं आफ्नो ग्रिल कुशलतापूर्वक र सफा गर्न चाहनुहुन्छ भने, बारबेक्यू नबिर्सनुहोस्। जहाँ सम्भव छ, कस्टिक पोटेश र सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्तै कठिन रसायनहरूको प्रयोग आर्थिक हुनुपर्छ। यसबाहेक, पनि पारिस्थितिक रूपमा हानिकारक स्प्रे, क्रीम र ब्रश स्प्रेड पनि छन्। यदि तपाईंसँग हातमा छैन भने, तपाइँ अझै पुरानो गृह उपचारहरूमा फर्किनु सक्नुहुन्छ।
Bestseller no। 1
म्याक्सक्सी क्लिन ओभन क्लीनर m०० मिलि जेल पेस्ट सहित। ओवन र ग्रिल क्लीनर ब्रश जिद्दी incrustations ढीला, आफैं सफा - को ताप बिना - गन्ध बिना + बोनस एन्ट्याब्याक ऊन प्रदर्शन
सफाई - ओवन क्लीनर जसले बिना खरोंच र खरोंच बिना कुनै जिद्दी उत्खनन हटाउँदछ, त्यसैले तपाईं अन्य चीजहरू आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
आवेदनमा सिम्पले - ठुलो सतहहरूमा जेल पेस्टलाई बसोबास गरेर, तपाईं यसलाई जहाँ पनि चाहानुहुन्छ सफा गर्न सक्नुहुन्छ, र पारंपरिक ओवन सफा स्प्रेको विरोधको रूपमा पनि धेरै बचत गर्नुहोस्।
स्पष्ट रूपमा विस्तारित - धेरै महिनाहरु को लागि एकाग्रता मा ओवन क्लीनर पावर सूत्र पर्याप्त छ, यसैले तपाईंलाई संधै यो हुनु पर्छ जब यो वास्तव मा सही ओवन क्लीनर को हात मा छ
हावामा ORANGE खुशबू - सुन्तला बोक्रा प्राप्त गरिएको छ जो प्राकृतिक सुन्तला खुशबू, को प्रयोग, एक सुखद ताजा गंध ओवन र ग्रिल छोडेर क्लीनर
प्लस बोन्न्चुच - MAXXI क्लेन एंटीबाक फ्लेकले पतला चांदीको साथ तपाईंको भान्सा सतहहरुमा स्वच्छ सफाईको साथ
प्रस्तावBestseller no। 2
Mellerud 2001002718 ग्रिल र BBQ क्लीनर 475 आकार सूचक
ठाडो सतहहरूको लागि प्रभावकारी चिपकने फोम
अस्थिर अवशेषहरू र ईन्क्रुस्टेशनहरू विघटन गर्दछ
सामग्रीहरूमा कोमल, संवेदनशील सतहहरूको लागि पनि
उत्तम बार्बेक्यु रमाईलोको लागि
Bestseller no। 3
म्याक्सक्सी क्लिन ओभन क्लीनर 1000 मिलि जेल पेस्ट सहित ओवन र ग्रिल क्लीनर ब्रश + बोनस एगप्लियस ऊन Ind सूचक
ORANGE FRUIT - प्राकृतिक सुन्तला सुगन्धको उपयोग गरेर, जुन सुन्तला पनी पातबाट प्राप्त भएको थियो ओवन र ग्रिललाई एक सुखद ताजा सुगन्ध
Bestseller no। 4
बायो-केम स्टोक रेजिन हानिकारक ग्रिल र ओवन क्लीनर 500ml 20 सम्म समाधान समाधान समाधान प्रदर्शन
Vर्स्याटाइल: चारकोल ग्रिल, इलेक्ट्रिक ग्रिल र ग्यास ग्रिल को लागी सबै आकार र भेरियन्ट मा उपयुक्त छ, जस्तै धुम्रपान ग्रिल, BBQ ग्रिल, केतल ग्रिल, कमल ग्रिल, कुंडा ग्रिल / ट्राइपोड ग्रिल, टेबल ग्रिल, स्ट्यान्ड ग्रिल, स्तम्भ ग्रिल, ग्रिल फायरप्लेस, मिनी -ग्रिल, ग्रिल कार्ट, क्याम्पि gr ग्रिल, बालकनी ग्रिल, सुटकेस ग्रिल, राउन्ड ग्रिल, ग्रिल ब्यारेल, राक्लेट ग्रिल र ग्यास रोस्टर। धूम्रपान गृह र स्मोक्हाउसका लागि उपयुक्त। EVEN डच ओभनमा लागू हुन्छ, तर पटिना पछि नविकरण गर्नुपर्दछ!
समय बचाउने: प्रत्येक चरम अवस्थामा तपाईंको ग्रिल को सरल तर व्यापक आधारभूत सफाई को लागी! गहन क्लीनरले लगभग स्वचालित रूपमा हठी, पुरानो फोहोर र धुवाँ राल भण्डारन र जलाइएको इन फ्याट्स, तेल, प्रोटीन र एल्युमिनियम पन्नी जस्ता अवशेषहरू हटाउँछ। प्रभावी सूत्रका लागि धन्यवाद चिपकने सक्रिय फोमको साथ, श्रमसाथी स्क्रबिंग वा अन्य खर्चहरूलाई रोक्न सकिन्छ। फोम सजिलैसँग समायोजित गर्न सकिन्छ र स्प्रे टाउकोमा समायोज्य नोजल प्रयोग गरेर doज गर्न सकिन्छ।
अप्टिमाइज्ड: यो ग्रिल क्लीनरको साथ केवल पेशेवरको रूपमा मात्र ग्रिलिंग छैन, तर सफा पनि जस्तै! स्टेनलेस स्टील, कास्ट फलाम, तामचीनी, पाना धातु, पोर्सिलेन र सिरेमिकमा लागू। यसैले ग्रिल पार्ट्स र ग्रिलका सामानहरू जस्तै पिज्जा स्टोन, ग्रिल टेongs्ग्ज, ग्रिल प्लेट, ग्रिल ब्रश, ग्रिल ग्रेट, हीटिंग एलिमेन्ट्स, फ्याट ड्रिप ट्रे, ग्रिल ट्रे, फ्याट ड्रयर, साइड पार्ट्स र ट्रे, किन्डलिंग चिम्नी, रोटिसरी, फायर कचौरा, आगोको भाँडो, ग्रिल ग्रैट र अरोमा रेलहरू) सफा गर्नको लागि यो उपयुक्त छ।
युनिभर्सल: NSF र HALAL प्रमाणित छ, त्यसैले सम्पूर्ण खाद्य उद्योगमा प्रयोग योग्य। सबै प्रकारका ओभनहरू जस्तै धुम्रपान गर्ने, ओभन र पिज्जा ओभनका लागि पनि भान्सामा उपयुक्त, साथै भाँडाकुँडाहरू, बुक्स, बेकिंग ट्रे, सम्प्स, सिरेमिक हब्स, इन्डक्शन हब्स, एक्स्ट्रक्टर हुडहरू, हब्स, गहिरो फ्राइरहरू र रेकर्ड फलाम प्यानहरू जस्तै कास्ट फलामका प्यानहरू वा ग्रिलिंग प्यान्स , खाना पकाउने प्रणाली र क्यान्टिन भान्छा र क्यान्टीनहरूमा पाइपहरू एक्स्ट्रक्टरको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
COST-EFFECTIVE and ENVIRONMENTLY CONSCIOUS: उच्च एकाग्रता र भौतिक अनुकूलताका कारण न केवल सबै निर्माताका लागि उपयुक्त छ, तर प्रयोग गर्नको लागि धेरै किफायती (मिक्सिंगको लागि खाली बोतल)। साथै फास्फेटहरू र घोलकहरू मुक्त। ताकि तपाईं पनि औद्योगिक क्वालिटीमा पर्यावरणीय सफाईको लागि प्रमाणित बायो-केम ब्रान्डको बारेमा आफूलाई विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ। प्रयोगकर्ता भिडियो: https://www.youtube.com/watch?v=LgHTi6QhVxI (सुरक्षा निर्देशनहरू नोट गर्नुहोस् - सुरक्षा लुगा सिफारिस गरिएको छ)
Bestseller no। 5
डा कप ओवन र ग्रिल क्लीनर पेशेवर क्लीनर सूचक
Bestseller no। 6
ग्रिल क्लीनर बारबेक्यू को लागि विशेष क्लीनर grilling पछि | व्यावसायिक क्लीनर ग्रिल सफा गर्न | ग्रिल ग्रेट क्लीनर र सक्रिय क्लीनर | प्रीमियम ग्रिल क्लीनर - यूबन वन (500ml क्लीनर) प्रदर्शन
GRILL एक पेशेवरको रूपमा सफाई: सफाई उत्पादनमा उच्च मागको लागि सिर्जना गरिएको, यो सक्रिय सफा गर्ने प्राय: सबै प्रकारका ग्रिलहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। चाहे धूम्रपान न गर्ने ग्रिल, कोइकोल ग्रिल, इलेक्ट्रिक ग्रिल वा टेबल ग्रिलको लागि सफा गर्नेको रूपमा। यो चमक सफा गर्ने मात्र लागि उपयुक्त छैन ग्याँस ग्रिल सफा तर व्यावसायिक क्वालिटीमा चुलो पनि सफा गर्नुहोस्। एक औद्योगिक क्लीनरको रूपमा यसलाई जर्मनीमा सफाई विज्ञहरूले विकसित गरेका थिए र उत्तम प्रिमियम सामग्रीहरूको साथ उत्पादन गरिएको थियो
जर्मन मा प्रीमियम गुणवत्ता: आफ्नो ग्रिल हेरचाह को हेरचाह दिनुहोस्। ग्रिल-सफाई लागि यो प्रिमियम क्लीनर, सजिलै जिद्दी encrustations घुल, नयाँ प्रकाश परिणामस्वरूप सफा र अधिकतम सुरक्षा दिन्छ। यसले स्टेनलेस स्टील क्लीनरको तीव्रता संग निरन्तर रूपमा यन्त्रहरूको जीवनभर फैल्छ। तपाईं ओवन सफा वा यो सबै-उद्देश्य क्लीनर संग सफा ग्रिल बनाउन चाहन्छ कि तपाईं scrubbing को धेरै समय र परेशानी सुरक्षित
बहुमुखी: द क्लीनर आदर्श यस्तो संडसी, बारबेक्यू, ग्रिल स्टेनलेस स्टील बारबेक्यू कटलरी, बारबेक्यू skewers, ग्रिल पैन, रोटी पकाने को तवा, ग्रिल काँटा वा ग्रिल पैन रूपमा बारबेक्यू सामान लागि विश्वव्यापी क्लीनर रूपमा अनुकूल छ। यो raclette grills को लागि ग्रिल क्लीनर को रूप मा राम्रो तरिकाले ओवन क्लीनर को रूप मा प्रयोग गरिन सक्छ, स्टोव क्लीनर या पैन क्लीनर। यस्तो जस्ता, पीतल र एल्यूमीनियम रूपमा चित्रित सतहहरु, प्लास्टिक, रबर, फलाम धातु र मिश्र मा प्रयोग छैन
प्रयोग मा सजिलो: एक ग्रिल संग हटाउनुहोस्, यस्तो ब्रांडेड BBQ मसला रूपमा ग्रिल मा बाहिरको माटो माझ एक स्प्रे, सतह सफाई स्प्रे, एक ग्रिल ब्रश संग उदाहरणका लागि यो वितरण संग साफ गर्न, क्लीनर गरौं छोटकरीमा मा भिजेको र ग्रिल सफा हटाउन। नतिजाले तपाईंलाई आश्चर्यचकित गर्नेछ। चूंकि क्लिल क्लीनर अत्यधिक ध्यान केंद्रित भएको छ, सफाई को लागि एक सानो रकम पर्याप्त छ। एक निवारक उपाय को रूप मा, तपाईं बारबेक्यू दस्ताने पनि पहन सकते हो
प्रीमियम गुणवत्ता र सेवा: उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित गर्नु हाम्रो उच्च प्राथमिकता हो। जर्मनीमा प्रीमियम सामग्री र उत्पादनको उचित मूल्यमा हामी सम्झौता गर्दैनौं। हामी तपाईंलाई उर्बन वनस्ट प्रीमियम ग्रिलिनिङरको बारेमा सबै रोचक जानकारी प्रदान गर्न चाहन्छौं। हाम्रो अनुकूल सेवा टोली फोन वा इ-मेलबाट कुनै प्रश्नहरूको लागि पनि उपलब्ध छ
Bestseller no। 7
3 BBN मा ग्रिल ब्रश 1 ग्रिल ब्रश ब्रश 304 संग ब्र्रिल्स सुरक्षित ब्रश स्टेनलेस स्टील स्पटुला टिकाऊ बुना कैम्पिंग बारबेक्यू ब्रश कोइकोल ग्रिल को लागि बिल्कुल सही ग्याँस ग्रिल र इलेक्ट्रिक ग्रिल संकेतक
एक्स्पिक BBQ ग्रिल ब्रश एक एक्सप्रेस संग: यो बार्बेक्यु प्रेमीहरूको लागि सही सहायक हो; तपाईं ब्रश र सजिलैसँग दाँत र जङ्गल भण्डारहरू हटाउन ब्रश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र स्क्रैर राम्रो तरिकाले र कुशलतापूर्वक जिद्दी दागहरू सफा गर्न सक्नुहुन्छ।
3 1 स्टेनलेस स्टेन बार्बेक्यू: भोजनको लागि स्टेनलेस स्टील स्क्रैपर। कुनै ब्रेस्लहरू बिस्तारै छैनन्। कुनै तीव्र किनाराहरू र यो ग्रिल ब्रश नाईलियन ग्रिल ब्रश जस्तै पिघल गर्दैन। म्याग्रेटहरू आकर्षित गर्न सजिलो छैन, बलियो जंगली प्रतिरोध। तपाईं उच्च लोहेको सामग्रीको बारे चिन्ता गर्नुपर्दैन, कृपया यसलाई प्रयोग गर्न निःशुल्क महसुस गर्नुहोस्।
गैर-स्लिप ह्यान्डल: ब्रश लम्बाइले तपाईंको हात ग्रिल द्वारा उत्पन्न गरिएको गर्मीबाट सुरक्षित गर्न सक्छ। उच्च गुणस्तर र गैर-पर्ची सामग्रीले यो सुनिश्चित गर्दछ कि यसले बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै वा ब्रेक गर्दैन। ब्रशको उत्तम डिजाइनले तपाईंको प्रयोगलाई बढाउँछ, कुशल छ र काम बचत गर्दछ।
उच्च गुण धातु: 18 "स्टेनलेस स्टील तार, जस्ती लोहा तार र बाल्टी, बलियो र टिकाऊ, क्षति पार्न सजिलो छैन।
विभिन्न ग्रिलहरूको लागि उपयुक्त: चाहे यो एक आउटडोर ग्रिल हो वा इनडोर प्रयोगको लागि ग्रिल हो। यो सफा गर्न सजिलो छ। ग्रिल ब्रश सबै प्रकार को गेट्स को लागी उपयुक्त छ, चीनी मिट्टी के बरतन, स्टेनलेस स्टील र कास्टिंग आयरन आदि। आदि आफ्नो ग्रिल देखो नया बनाओ।
Bestseller no। 8
चेमिनोक्स ग्रिल क्लीनर (1000 मिली), 15 लिटर समाधान सम्म केन्द्रित, ग्यास ग्रिल क्लीनर, ग्रिल सफाई incl। स्प्रे बोतल सूचक
केमिनोक्स ग्रिल सफाई: सबै ग्रिल प्रकारका लागि अत्यधिक प्रभावी ग्रिल क्लीनर! पानीसँग मिसाउनको लागि केन्द्रितको रूपमा (15 लिटर समाधान सम्म)। ग्यास ग्रिल, कोइकोल ग्रिल, BBQ र ग्रिल ग्रैटको लागि।
लागत बचत गर्नुहोस्: विशेष गरी आर्थिक! तीव्र प्रदूषण प्रयोग गर्नुहोस् (1:2ध्यान / पानी) वा एक थप रूपमा (1: 20 ध्यान / पानी)। पहिले नै मिश्रित उत्पादन भन्दा प्रभावशाली रूपमा अधिक अनुप्रयोगहरू।
सफा ग्रिल: प्रयोग गर्न सजिलो! सफाई एजेन्ट ग्रिलले भरपर्दो ढ st्गले जिद्दी र अडी रहित माटोलाई हटाउँदछ जस्तै तेल, ग्रीस, काज, मोम, फिंगरप्रिन्ट, ग्रीस, धूलो आदि।
प्रीमियम गुणस्तर उत्पादन: यो तपाइँको चारकोल ग्रिल, ग्यास ग्रिल वा ग्रिल ग्रैट आक्रमण गर्दैन। स्वच्छ र सजिलो ह्यान्डलिंगको लागि उद्योग मानक। ठुलो भान्छामा, क्यान्टीन, बार्बेक्यु स्टेशन!
जर्मनीमा उच्च गुणस्तरको आधारमा बनाइएको र उत्पादन गरिएको हो। ग्यास ग्रिल सफाई, ग्रिल ग्रैट क्लीनर, स्टेनलेस स्टील ग्रिल को लागी ग्रिल सफाई। सफा, कडा, छिटो र तीव्र।
Bestseller no। 9
MUG ग्रिल-रिन 1L प्रदर्शन
Grills, fryers, ovens र enameled बेकिंग ट्रे को लागि उपयुक्त
पकाएका अवशिष्टहरू, उच्च चिपचिपापनलाई पराजित गर्दछ
विशेष ब्रशसँग लक्षित अनुप्रयोग
ठुलो सफाईको लागि बलियो
प्रति बोतल: 1 लिटर
Bestseller no। 10
क्लाउस ग्रिल ग्रिल क्लीनर, २ x m०० मिलि, गहन क्लीनर, पेशेवर क्लीनर, ग्रिल, स्टोभटप्स, ओभन र एक्स्ट्रक्टर हुडका लागि अत्यधिक प्रभावकारी सफाई एजेन्ट
शक्तिशाली अंतर्देशीय क्लीयरर: प्रोफे क्लाउसबाट ग्रिल क्लीनर। भारी माटोमा चाँडो र गहन सफाईको लागि आदर्श।
कडा र प्रभावकारी सफा गर्ने पावर: यो पेशेवर क्लीनर कुनै पनि परिवारमा हराउनु हुँदैन। यसले छिटो र सजीलो फ्याट र प्रोटीन जम्मा साथै incrusttions हटाउँछ।
VERSATILE USE: क्लाउस ग्रिल (t) क्लीनर ग्रिल, स्टोभटप्स, एक्स्ट्रक्टर हुड, ओभन, अन्य मेशिन र फोहोर सतहहरू सफा गर्न आदर्श हो। एल्युमिनियम, anodized र प्रकाश धातु मिश्र को लागी उपयुक्त छैन।
प्रयोग गर्न सजिलो: सतहहरूमा तैयार-प्रयोग-समाधान समाधान लागू गर्नुहोस् र -5-१० मिनेटको लागि छोड्नुहोस्। ब्रश वा स्पन्जले सफा गर्नुहोस् र तातो पानीले कुल्ला। भारी माटोको लागि प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
स्ट्रिमर द्वारा प्रीमियम क्वालिटी मेड: यो उच्च गुणस्तरको उत्पादन निर्मित र जर्मनीमा विशेष बोतलबाट बनाइएको हो।
व्यक्तिगत प्रमाण: ग्रिल क्लीनर समीक्षा
दर्जा: 3.7/ 5।3चुनावबाट।
तपाईंले मतदान गर्नुभयो 5,4महिना पहिले।
अघिल्लो लेखmultifunction उपकरण
अर्को लेखपूल निर्वात
घास काटन मिसिन